Min Hui (Fujian) Horticultural Co., Ltd.yakavambwa muna Kurume 2012 ine guta rakanyoreswa remamiriyoni makumi maviri eyuan.
Iri muKuitou Industrial Park, pingnan County, Ningde City, Fujian Province, ine vashandi vanopfuura zana nemakumi matanhatu;Iyo kambani ine 10,000 square metres yemazuva ano tishu tsika seedling tsvakiridzo nekusimudzira base, uye 200 maeka emazuva ano ezvekurima greenhouse nekudyara nheyo;Ndiyo kambani yekutanga yemazuva ano yekurima maruva muChina inoita munyama matishu tsika, matishu tsika kudyara nekutengesa.
Iyo kambani inonyanya kuita tsika yematishu uye kudyara kutengesa kweanonaka uye maruva marudzi, mbesa dzakasvibira, diki diki zvirimwa, michero nemiriwo.Panguva imwecheteyo, inobatanidzwa mukutengesa kwevhu rekudyara maruva, maruva fetiraiza, flowerpot midziyo yekurima gadheni nemidziyo.Kugadzirwa kwegore negore kwembesa kunosvika 12-15 miriyoni, uye mutengo wepagore wekutengesa unodarika 35 miriyoni yuan.
Min Hui (Fujian) Horticultural Co., Ltd. ibhizimusi rinotungamira muguta reNingde, bhizinesi repamusoro-soro renyika uye bhizinesi repamusoro-soro redunhu;Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa pasirese pasirese, uye isu ndisu chete kambani iri kumabvazuva kweFujian ine hunhu hwekugadzira, kutengesa uye kutumira kunze mbesa dzezvirimwa.Kubva patakawana rezenisi rekutumira kunze kwenyika muna 2018, takabudirira kutumira kunze kwenyika dzinopfuura gumi nenhatu dzinosanganisira United States, Australia, Japan neSouth Korea.
Parizvino, kambani ine online chitoro kutengesa mapuratifomu akadai Tmall, JD.COM, Taobao, diki-chitoro WeChat chikuva, succulent APP chikuva uye Alibaba, uye yakasaina kwenguva refu zvibvumirano zvekushandira pamwe nevanopfuura 100 vatengi kusanganisira hombe zvitoro greenhouses uye. yekuona nzvimbo dzegreenhouse munyika yese, ine vatengi pasi rese.
Mapurojekiti makuru ekambani
Tsvagiridzo nekusimudzira uye kugadzirwa kwetishu tsika mbesa.
Parizvino, kambani ine gumi nemaviri epakati R&D technical backbone vashandi, kusanganisira 8 vane koreji degree kana pamusoro.Panyaya yetekinoroji, kambani yakaunganidza matekinoroji akapfuma senge kupfuya nekurima kweanonaka nemaruva, uye ine hwaro hwakasimba hwehunyanzvi.
Uyezve, kambani ine hwaro hwakanaka hwekubatana kwehunyanzvi nekutsinhana kumba nekune dzimwe nyika, uye yakagadzira hukama hwakareba uye hwakasimba hwekudyidzana kwekugadzira, kudzidza nekutsvaga neFujian Agriculture uye Forestry University, Fujian Academy yeAgricultural Sayenzi uye Fujian Normal University. , nezvimwewo, uye akavaka nzvimbo yekudzidzira yevadzidzi vekoreji.
Aya mayuniti ekutsvagisa sainzi anopa rutsigiro rwakasimba rwehunyanzvi kukambani.Parizvino, inogona kupa anopfuura mazana mana emhando dzembeu dzemaruva pamusika, pakati pawo marudzi anopfuura mazana matatu emhando dzinoshomeka anogadzirwa uye anogadzirwa, achiona simba remitengo rinosvika makumi manomwe muzana emadzinde ari pamusika.
Parizvino, iyo yemazuva ano yekurima greenhouse ine 2,700 square metres ye-e-commerce uye maruva Logistics yekufambisa nzvimbo yekuchengetera, 1,300 square metres yezvigadzirwa zvekuratidzira uye nzvimbo yekutengesa uye anopfuura zviuru makumi maviri emativi emamita apedzwa nekushandiswa.
Iyo kambani yakamisa network uye madhipatimendi ekutengesa kunze kwenyika, uye ine online shopu yekutengesa mapuratifomu akadai seTmall, JD.COM, Taobao, micro-store WeChat chikuva, succulent APP chikuva uye Alibaba.Zvigadzirwa zvinotengeswa zvakanaka munyika yese, uye zvakare zvinotengeswa kuEurope, America, Australia, Japan neSouth Korea.
Cooperative kudyara mugreenhouse.
Nekubatana kwe "Company+Farmers+Internet" uye kuburikidza ne "Seedling Provision+Technical Support+E-commerce Repurchase", kambani inotyaira varimi kuvandudza kudyara kwemaruva nekutanga mabhizinesi, uye vachiramba vachiwedzera mari yevarimi.Kuburikidza nekuyedza kudyara tsvagiridzo mumabhesi maviri ekudyara muPingnan, kambani ine seti yekudyara kwakaringana nzira yekudyara, iyo inowedzera succulents kusvika kune manomwe mabhesi ekubvisa hurombo mutaundi rega rega rePingnan, uye inoshandisa nzira yekubatana ye "internet plus Company + Farmers" , iyo inobudirira kutyaira mari yevarimi, inounza nzira itsva yekunyatsogadzirisa urombo, uye inoona "kukunda-kukunda" pakati pemabhizimisi nevarimi.Kudyarwa kwegore negore kwepurojekiti iyi mamiriyoni maviri emiti, uye kutengeswa kwegore negore kwembesa dzakapedzwa kunodarika mamiriyoni masere yuan, kuve nechokwadi chokuti mari yegore negore yemhuri yevarombo i40,000-60,000 yuan.